हाम्राे पिपलबाेट » मजदुर भन्छन् ‘बाँकेमा लगाईएको पुनः लकडाउनले चुलो निभ्ने भो’ मजदुर भन्छन् ‘बाँकेमा लगाईएको पुनः लकडाउनले चुलो निभ्ने भो’ – हाम्राे पिपलबाेट
मजदुर भन्छन् ‘बाँकेमा लगाईएको पुनः लकडाउनले चुलो निभ्ने भो’
बाँके कोहलपुरका नगरपालिका वडा नं. २ कि ३८ वर्षीय अञ्जु थापा बुधबार दिउँसै देखि चिन्तित देखिन्थीन । कोभिड नियन्त्रणका लागि लकडाउन हुने खबर सुनेर उनी दुखी भएकी हुन । कारण एउटै थियो, ‘पेट कसरी पाल्ने ।’ उनी फलफूल व्यवसायी हुन । बुधबार रातिबाट लकडाउन हुने भएपछि थापाले निराश हुदै कुरा गरिन्, म केही गरी पेट पाल्न सकुला तर तीन बच्चा र श्रीमानको खर्च कसरी पु¥याउने भन्ने चिन्ता लागेको छ ? कोहलपुर स्थित चौराहमा भेटिएकी अञ्जु थापाका अनुसार पहिलो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आफ्नो जन्म स्थान भएको पुर्खेयौली ठाँउ पश्चिम रुकुम जान बाध्य भएको बताइन् । लामो समयसम्म भएको बन्दाबन्दीले घरभाडा सम्म बुझाउन नसक्दा जन्मस्थानमै फर्कन बाध्य भएको बताइन् । नेपालगञ्जमा आजदेखी हुने भनिएको बन्दाबन्दीको प्रभाव कोहलपुरमा पनी पर्ने भएकाले दुई तिन दिन देखी व्यापार नभएको थापाले बताइन् ।
जसोतसो फलफुल बेचेर परिवार पाल्दै आएकी थापाले लकडाउनमा फलफूल नै बिक्री नभए आम्दानी कसरी हुन्छ । आम्दानी नभए साँझा बिहान कसरी छाक टार्ने हो निकै धौधौ कुरा सुनाइन् । थापा जस्तै अर्का पात्र भेटिए प्युठानका तेज बहादुर हमाल । कोहलपुरमा भाडा लिएर होटल व्यवसायी चलाएका हमाललाई पनी पहिलो चरणको कोरोना भाइरसले निकै थला पारेको बताए । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण घरबाटै पैसा पठाइदिएर आफू जन्म स्थान जानुपरेको पीडा सुनाए । हमाल भन्छन् कोरोना भाइरसले फेरी सताउने भयो, दुईचार पैसा कमाएर परिबारलाई चलाएको थिए अब फेरी बन्द भन्ने हल्ला सुनियो लामो समयसम्म बन्द भयो भने कसरी परिवार पाल्ने वा फेरी जन्मस्थान प्युठानमै फर्किने केही सोच्न नसकेको उनले बताए । केही गरी बन्दाबन्दी हुनुभन्दा अगाडी नै दुईचार रुपँया पैसा कमाउन सके केही राहत हुने उनको सोच थियो । बेलाबेलामा लकडाउनको खबरले चल्दै आएको रोजीरोटी खोसिने चिन्ताले हमाल निराश देखिन्थे । हमाल विगत ३ वर्षदेखि होटल व्यवसाय चलाएर पेट परिवार पाल्दै आएका छन् । उनी त एउटा प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुन उनको जस्तै लकडाउनको चिन्ता दैनिक मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउनेहरुको पिडा कहानी लाग्दो छ । त्यस्तै अटो चलाएर नै आफ्नो र परिवारको पेट पाल्दै आएका कोहलपुर नगरपालिका वडा १ का राजु परिवारलाई पनि चिन्ता उस्तै छ, लकडाउनमा परिवार कसरी पाल्ने । लकडाउन भयो भने के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिए घरमै बस्छु । लकडाउन भयो भने परिवार कसरी पाल्ने ? नेपालीले दुख व्यक्त गर्दैै भने,‘४ छोराछोरी र आमा बुवा गरी ८ जनाको परिवार छ । कमाउने श्रोत भनेको यो एउटा आटो रिक्सा हो । अरु कुनै अम्दानीको श्रोत छैन ।’ लकडाउन भयो भने न कतै जान मिल्छ न कुनै काम नै । जसले साह्रै दुख हुने उनको भनाई थियो । गत वर्षको लकडाउन लाई सम्झिदै उनले भने,‘यस्तो अवस्थामा त कसैले सरसापटी पनि दिदैनन् । हामी गरिबको चुल्हो कसरी बल्छ ।’ यो लकडाउनमा निकै दुख हुने दुखेसो उनले पोखे । रिक्सा चालक मात्रै होइन दिनमा कमाएर साँझ चुल्हो बाल्ने सबै श्रमिकहरुको पिडा उस्तै हो ।
बिशेष गरेर ओटो चालक, ठेला व्यपारी, दैनिक ज्याला मजदुरहरु,भाडामा व्यवसायी चलाएका लाई निकै प्रभाबित हुने गर्दछन् । जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र बैशाख ९ गते देखि १५ गते सम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । अवस्था समान्य नभए लकडाउन बढ्न सक्ने जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।
९ बैशाख २०७८ मा प्रकाशित